Hawaiian Airlines mitondra tsy miato Aloha mankany Florida
Home » Vaovao momba ny fitsangatsanganana » Hawaiian Airlines mitondra tsy miato Aloha mankany Florida
Ny Hawaiian Airlines dia iray amin'ireo kaompaniam-pitaterana azo antoka indrindra eto an-tany. Ny sidina lavitra any an-toerana kosa dia atahorana ho an'i Etazonia manana fihanaky ny virus COVID-19 any Hawaii manana ny tahan'ny aretina ambany indrindra any Etazonia. Mila mpizahatany i Hawaii, mila mpizahatany i Florida. Hatraiza ny maha azo antoka ny fampifandraisana an'i Orlando amin'i Honolulu mandritra ny areti-mandringana COVID-19?
Hawaiian Airlines Flight 86 no sidina voalohany tsy an-kijanona eo anelanelan'ny Honolulu sy Orlando, sidina voalohany tsy an-kijanona eo anelanelan'ny Hawaii sy ny South East United States.
Ny aretina Coronavirus dia be any Florida. Ny aretina Coronavirus no ambany indrindra any Hawaii. Hatraiza ny maha-azo antoka ny fanasana mpitsidika avy any Florida mankany amin'ny morontsirak'i Hawaii?
Tsodrano nentim-paharazana Hawaii, governoran'i Hawaii mpiavonavona ary Tale jeneralin'ny seranam-piaramanidina, fa tsy ny Tale jeneralin'ny Fahefana fizahan-tany Hawaii dia nanatri-maso ny fiaingan'ny sidina voalohany avy any HNL mankany MCO androany
Vakio ny tantara manontolo - tsindrio eto na amin'ny PEJY MANARAKA